စီးရီးအေ သို့ ဂြျောဂငျြဟို ပွနျသှားနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ ကောလဟလ တှေ အပျေါ တုနျ့ပွနျ ပွောဆိုလိုကျတဲ့ အေးဂငျြ့ ဖွဈသူ #ဆနျးတို့ဈ - SPORTS MYANMAR
စီးရီးအေ သို့ ဂြျောဂငျြဟို ပွနျသှားနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ ကောလဟလ တှေ အပျေါ တုနျ့ပွနျ ပွောဆိုလိုကျတဲ့ အေးဂငျြ့ ဖွဈသူ #ဆနျးတို့ဈ
အီတလီ လကျရှေးစငျ ကှငျးလယျလူ ဂြျောဂငျြဟို ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကမှ နာပိုလီ အသငျး ကနေ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ပေါငျ ၅၇ သနျး နဲ့ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ကာ ၅နှဈ စာခြုပျ ခြုပျဆို ခဲ့ပါတယျ ။ မနှဈ က မနျနဂြော မျောရဈဇီယို ဆာရီ ရဲ့ ပထမဆုံး ချေါယူမှု ဖွဈခဲ့တာနဲ့ အညီ ဂြျောဂငျြဟို ဟာ ၄ငျးရဲ့ ကစားကှကျ မှာ မရှိမဖွဈ ကစားသမား တယောကျ အဖွဈ ရပျတညျ ခဲ့ပါတယျ ။
ဆာရီ ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ယူရိုပါလိဂျ ခနျြပီယံဆု ကို ရယူ ပေးခဲ့သလို ၊ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့ ကိုပါ စှမျးဆောငျ ပေးခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လညျး ယခုနှဈ ဘောလုံး ရာသီ မတိုငျမီ မှာ စီးရီးအေ ကလပျ ဂြူဗငျတပျ အသငျး သို့ ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ပါတယျ ။
ဂြျောဂငျြဟို ကတော့ ဆရာ ဖွဈသူ ဆာရီ ရဲ့ အနောကျသို့ မလိုကျခဲ့ပဲ ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ ၄ငျးရဲ့ ခွစှေမျး ကို သကျသေ ပွဖို့ ဆကျလကျ ကနျြရဈ ခဲ့ပါတယျ ။ ဂြျောဂငျြဟို ဟာ ငယျငယျလေး ကတညျးက ဘရာဇီး ကနေ အီတလီ ကို ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့သလို ၊ အကယျဒမီ ဘောလုံးသမား ဘဝ ကိုလညျး အီတလီ မှာ စတငျ ခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ နောကျထပျ နအေိမျ လို ဖွဈနပေါတယျ ။
ဒါကွောငျ့မို့ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ပွောငျးရှေ့ လာတာ အီတလီ နိုငျငံ ကနေ တခွား ရမွေေ တခု ကို ပထမဆုံး ရှပွေ့ောငျးခဲ့ခွငျး ဖွဈတယျ လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ ။ ပထမ ရာသီ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ အသားကဖြို့ ၊ ခွစှေမျး ပွနိုငျဖို့ ရုနျးကနျ ခဲ့ရတဲ့ ဂြျောဂငျြဟို ဟာ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ မှာတော့ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ခွစှေမျးပွ ကစား ပေးနိုငျတဲ့ ကစားသမား တဦး ဖွဈလာပါတယျ ။
မနကေ့ Radio Sportiva နဲ့ တှဆေုံ့ခနျး မှာတော့ ဂြျောဂငျြဟို ရဲ့ အေးဂငျြ့ ဖွဈသူ ယာအို ဆနျးတို့ဈ က ၄ငျးရဲ့ ကစားသမား ဟာ တချြိနျခြိနျ မှာ စီးရီးအေ သို့ ပွနျသှား နိုငျကွောငျး အရိပျအမွှကျ ဆိုခဲ့သလို ၊ တဖကျ မှာ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ အတှငျး ကလပျ အတှကျရော ၊ နိုငျငံ လကျရှေးစငျ အသငျး အတှကျပါ ခွစှေမျး ပွထား နိုငျတာက ဂြျောဂငျြဟို အတှကျ အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျနကွေောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ ။
ဆနျးတို့ဈ က ” ဘောလုံး မှာ အရာ အားလုံး ဖွဈနိုငျပါတယျ ။ အီတလီ ကို ပွနျဖို့ စိတျဆန်ဒ ကလညျး ဂြျောဂငျြဟို ဆီမှာ အမွဲ ရှိနနေိုငျပါတယျ ။ အခု အထိ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ရထားတဲ့ အတှအေ့ကွုံ အားလုံး ကို သူ စီးရီးအေ မှာ ပွနျပွီး အသုံးခြ လို့ ရမှာပါ ။ သူဟာ စကူဒကျတို ဆုဖလား အတှကျ ၂ ကွိမျ ၊ ၃ ကွိမျလောကျ တိုကျပှဲ ဝငျခဲ့ဖူးပါတယျ ။ ”
” ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ဟာ သူ့ အတှကျတော့ အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျတယျ လို့ ပွောရမှာပါ ။ နိုငျငံ လကျရှေးစငျ အသငျး အတှကျလညျး သူ ခွစှေမျး ပွနတေယျ ။ ပငျနယျတီ ကနလေညျး ဂိုးတှေ အမွဲ သှငျးလို့ ရနတေယျ ။ ကြှနျတျော ကတော့ ဂြျောဂငျြဟို ဟာ လာမယျ့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာလညျး ခွစှေမျး ဆကျလကျ ပွသ နိုငျဦးမယျ လို့ ထငျပါတယျ ။ အဲ့လို ဆိုရငျ သူ လာမယျ့ ကမ်ဘာ့ ဖလား မှာရော ဘာကွောငျ့ ခွစှေမျး မပွနိုငျရမှာလဲ ? ”
” တဖကျ မှာ ပွနျကွညျ့ရငျ နိုငျငံ လကျရှေးစငျ အသငျး အတှကျ ပှဲကစားခှငျ့ တှကေ အမြားကွီး မရနိုငျပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကြှနျတျော တို့ဟာ ကစားခှငျ့ ရမယျ့ ပှဲစဉျတိုငျး အတှကျ အသငျ့ ဖွဈနအေောငျ ပွငျဆငျဖို့ လိုပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။
စီးရီးအေ သို့ ဂျော်ဂျင်ဟို ပြန်သွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟလ တွေ အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူ #ဆန်းတို့စ်
အီတလီ လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကမှ နာပိုလီ အသင်း ကနေ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ပေါင် ၅၇ သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ကာ ၅နှစ် စာချုပ် ချုပ်ဆို ခဲ့ပါတယ် ။ မနှစ် က မန်နေဂျာ မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ ရဲ့ ပထမဆုံး ခေါ်ယူမှု ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ အညီ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ၄င်းရဲ့ ကစားကွက် မှာ မရှိမဖြစ် ကစားသမား တယောက် အဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့ပါတယ် ။
ဆာရီ ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ယူရိုပါလိဂ် ချန်ပီယံဆု ကို ရယူ ပေးခဲ့သလို ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ကိုပါ စွမ်းဆောင် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်း ယခုနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မတိုင်မီ မှာ စီးရီးအေ ကလပ် ဂျူဗင်တပ် အသင်း သို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဂျော်ဂျင်ဟို ကတော့ ဆရာ ဖြစ်သူ ဆာရီ ရဲ့ အနောက်သို့ မလိုက်ခဲ့ပဲ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ၄င်းရဲ့ ခြေစွမ်း ကို သက်သေ ပြဖို့ ဆက်လက် ကျန်ရစ် ခဲ့ပါတယ် ။ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ဘရာဇီး ကနေ အီတလီ ကို ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့သလို ၊ အကယ်ဒမီ ဘောလုံးသမား ဘဝ ကိုလည်း အီတလီ မှာ စတင် ခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်ထပ် နေအိမ် လို ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မို့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ လာတာ အီတလီ နိုင်ငံ ကနေ တခြား ရေမြေ တခု ကို ပထမဆုံး ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ပထမ ရာသီ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ အသားကျဖို့ ၊ ခြေစွမ်း ပြနိုင်ဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရတဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မှာတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ခြေစွမ်းပြ ကစား ပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမား တဦး ဖြစ်လာပါတယ် ။
မနေ့က Radio Sportiva နဲ့ တွေ့ဆုံခန်း မှာတော့ ဂျော်ဂျင်ဟို ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူ ယာအို ဆန်းတို့စ် က ၄င်းရဲ့ ကစားသမား ဟာ တချိ်န်ချိန် မှာ စီးရီးအေ သို့ ပြန်သွား နိုင်ကြောင်း အရိပ်အမြွက် ဆိုခဲ့သလို ၊ တဖက် မှာ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း ကလပ် အတွက်ရော ၊ နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက်ပါ ခြေစွမ်း ပြထား နိုင်တာက ဂျော်ဂျင်ဟို အတွက် အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်နေကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ဆန်းတို့စ် က ” ဘောလုံး မှာ အရာ အားလုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အီတလီ ကို ပြန်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒ ကလည်း ဂျော်ဂျင်ဟို ဆီမှာ အမြဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ အခု အထိ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ရထားတဲ့ အတွေ့အကြုံ အားလုံး ကို သူ စီးရီးအေ မှာ ပြန်ပြီး အသုံးချ လို့ ရမှာပါ ။ သူဟာ စကူဒက်တို ဆုဖလား အတွက် ၂ ကြိမ် ၊ ၃ ကြိမ်လောက် တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ”
” ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ဟာ သူ့ အတွက်တော့ အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်တယ် လို့ ပြောရမှာပါ ။ နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက်လည်း သူ ခြေစွမ်း ပြနေတယ် ။ ပင်နယ်တီ ကနေလည်း ဂိုးတွေ အမြဲ သွင်းလို့ ရနေတယ် ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ လာမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ မှာလည်း ခြေစွမ်း ဆက်လက် ပြသ နိုင်ဦးမယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။ အဲ့လို ဆိုရင် သူ လာမယ့် ကမ္ဘာ့ ဖလား မှာရော ဘာကြောင့် ခြေစွမ်း မပြနိုင်ရမှာလဲ ? ”
” တဖက် မှာ ပြန်ကြည့်ရင် နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် ပွဲကစားခွင့် တွေက အများကြီး မရနိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် တို့ဟာ ကစားခွင့် ရမယ့် ပွဲစဉ်တိုင်း အတွက် အသင့် ဖြစ်နေအောင် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။